Cabitaano Caafimaadka U Roon Jirkana Ka Saara Sunta Iyo Qashinka - Daryeel Magazine
Waxay Hafza maanta idiin soo bandhigaysaaa Cabitaano jirka ka saara sunta iyo wasakhda, tamar badanna laga helo. Cabitaanadaan macaan ayaa sidoo kale horumariya caafimaadka qofka. Waxay kaloo hoos u dhigaan cayilka.
Jirka oo qashinka laga saaro waxay kordhisaa quruxda maqaarka, waxay siyaadisaa tamarta waxay caawisaa habka dheefshiidka iyo luminta miisaanka. Sidoo kale qashin saariddu waxay kor u qaadda shaqada kilyaha, beerka iyo mindhicirrada.
waxaa la cabayaa aroortii quraacda ka hor waxaa uu jirka ka sifeeyaa sunta iyo qashinka wuxuuna u fiican yahay dheefshiidka, waxaa laga samaynayaa:
Caleenta loo yaqaan baqduuniska ama parsley
waa cabitaan la cabayo xilliga qadada, waxaad ka helaysaa fiitamino badan, waxaa laga samaynayaa
waa cabitaan kuu siinaya energy badan waxaa laga samaynayaa:
Daawo muuqaalkaan hoose:
Cabitaan Korka Dhalaaliya, Caafimaadka Lafahana Xoojiya Calaamadaha Lagu Garto Haduu Jidhkaagu Sumaysan Yahay & Sida Sunta Jidhka Looga Saaro HAFZA: Cabitaan Cayilka Yareeya Jirkana Nadiifiya Si Dabiici Ah Uga Nadiifi Beerkaaga Sunta
Hergabka waxaa sababo fayras calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid ah qandho, qufac, cune xanuun, …